YONWAYTECH LED Ratidza Warranty Policy - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
YONWAYTECH LED Ratidza Warranty Policy
YONWAYTECH LED Ratidza Warranty Policy:
1; Warranty Makuriro
Iyi Gwaro Rewarranty rinoshanda kune zvigadzirwa zvekuratidzira zve LED (zvinonzi pano "Zvigadzirwa") zvakatengwa zvakananga kubva kuShenzhen Yonwaytech Co, Ltd. (ino inonzi "Yonwaytech") uye mukati meWarranty Period.
Chero zvigadzirwa zvisina kutengwa zvakananga kubva kuYonwaytech hazvishande kune iyi Warranty Policy.
2; Warranty Nguva
Iyo garandi nguva ichave inoenderana nechero yekutengesa kondirakiti kana mvumo yekutora PI. Ndokumbirawo muve nechokwadi chekuti kiredhiti kadhi kana mamwe magwaro ari pamutemo anochengetedzwa.
3; garandi Service
Zvigadzirwa zvinofanirwa kuiswa uye zvinoshandiswa zvakanyatsoenderana neiyo yekuisa Mirayiridzo uye Chenjedzo yeKushandisa yakataurwa mune yechigadzirwa bhuku. Kana Zvigadzirwa zvine zvikanganiso zvemhando yepamusoro, zvishandiso, uye kugadzirwa panguva yekushandisa zvakajairika, Yonwaytech inopa sevhisi sevhisi yezvigadzirwa pasi peiyi Waranti Sisitimu.
4; Warranty Service Mhando
4.1 Online Remote Yemahara technical Service
Iyo iri kure yehunyanzvi kutungamira kunopihwa kuburikidza nekukurumidza mameseji maturusi senge nhare, tsamba, uye dzimwe nzira dzekubatsira kugadzirisa zvakapusa uye zvakajairika matambudziko ehunyanzvi. Iri sevhisi rinoshanda kumatambudziko ehunyanzvi anosanganisira asi asina kuganhurirwa nenyaya yekubatanidza yewaya tambo uye tambo yemagetsi, system software kuburitsa kwesoftware kushandiswa uye paramende masetingi, uye yekutsiva nyaya yemo module, magetsi, system kadhi, nezvimwe.
4.2 Dzokera kuFekitori Yekugadzirisa Sevhisi
a) Kune matambudziko eMagadzirirwo asingagone kugadziriswa nepamhepo kure sevhisi, Yonwaytech inosimbisa nevatengi kuti vape here kudzoka kufekitori yekugadzirisa sevhisi.
b) Kana basa rekugadzirisa fekitori richidikanwa, mutengi anotakura mutoro, inishuwarenzi, mutero uye kubvumidzwa kwetsika kudzoreredza kuendesa kwezvinhu zvakadzoserwa kana zvikamu kunzvimbo yemasevhisi eYonwaytech. Uye Yonwaytech anotumira kumashure zvakagadziriswa zvigadzirwa kana zvikamu kumutengi uye zvinongotakura nzira-imwe yekutakura.
c) Yonwaytech acharamba kusatenderwa kudzosa kuendesa kuburikidza nemubhadharo paanosvika uye haazovi nemhosva kune chero mutero uye tsika yekubvisa mari. Yonwaytech haizovi nemhosva yekukanganisa, kukuvara kana kurasikirwa kwezvakagadziriswa zvigadzirwa kana zvikamu nekuda kwekufambisa kana pasuru isiriyo
4.3 Ipa Iyo-saiti Injiniya Sevhisi Yemhando Dzenyaya
a) Kana paine nyaya yemhando yepamusoro inokonzerwa nechigadzirwa chaicho, uye Yonwaytech achitenda kuti mamiriro acho anodikanwa, pane-saiti mainjiniya sevhisi ichagoverwa.
b) Panyaya iyi, mutengi achapa mhosho kumisangano kuna Yonwaytech yekushandisa saiti saiti. Zvinyorwa zvemushumo wekukanganisa zvinosanganisira asi zvisingagumiri kumifananidzo, mavhidhiyo, huwandu hwezvikanganiso, nezvimwe, kugonesa Yonwaytech kuitisa yekutanga mhosva yekukanganisa kutonga. Kana dambudziko remhando yepamusoro risina kufukidzwa neWarranty Policy iyi mushure mekuferefetwa kweinjiniya kweYonwaytech, mutengi achabhadhara mari yekufambisa uye fizi yehunyanzvi sevhisi sechibvumirano chekutengesa kana PI yakatenderwa.
c) Zvikamu zvinokanganisa zvinotsiviwa neinjiniya dzepa-saiti dzeYonwaytech ichave yeYonwaytech.